अवकाश पाएका कर्मचारी पुनःनियुक्ति !::Best News Experience from Nepal
बाँके । नरैनापुर गाउँपालिकाले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई पुनः कर्मचारीमा नियुक्त गरेको रहस्य बाहिर आएको छ।
कर्मचारी सङ्केत नं. १२२३३६ रहेका खाँ अनिवार्य अवकाश भएको भन्दै मिति २०७५ वैशाख ७ गते नै जिल्ला समन्वय समितिलाई जानकारी पत्र पठाइसकिएको छ। उक्त पत्र मिति २०७५ वैशाख २६ गते जिल्ला समन्वय समितिमा दर्ता भएको देखिन्छ। तर उनी हालसम्म पनि नरैनापुर गाउँपालिकामै कार्यरत छन् ।
अवकाश प्राप्त कर्मचारी खाँ अहिले पनि गाउँपालिकाको जिन्सी प्रशासन तथा खरिद एकाइ प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेको गाउँपालिकाको वेबसाइटमा समेत देखिन्छ। उनले राज्यकोषको चरम दुरुपयोग गर्दै दोहोरो सुविधा लिइरहेको अन्य कर्मचारीहरु बताउँछन्। उनले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण, औषधोपचार र अन्य सुविधाहरुका साथै गाउँपालिकाको कर्मचारीका रूपमा तलब भत्ताका साथै अन्य सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दलबहादुर बस्नेतले अवकाश प्राप्त कर्मचारी खाँ गाउँपालिकामै कार्यरत रहेको स्वीकार गरे पनि थप जानकारी दिन चाहेनन्। यस विषयमा जनप्रतिनिधिहरुसँग बुझ्न भन्दै उनी पन्छिए। गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, “जनप्रतिनिधिसँग बुझ्नुस्, उहाँहरुले गरेको निर्णयबारे मलाई थाहा छैन।”
गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मीकान्त मिश्राले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको बताए। उनले भने, “अहिलेसम्म भएको व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुनुपर्छ, उनले काम गरिरहेका छन् ।, मलाई थाहा भएको त्यतिमात्रै हो। नियुक्ति कसरी र कहिले भए भन्ने मलाई थाहा छैन।”
कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था भए पनि इस्माइल खाँले निवृत्तिभरणसँगै गाउँपालिकाबाट पाउने सेवा सुविधा लिइरहनुभएको त्यहाँ कर्मचारीहरूको गुनासो छ। यस विषयमा मोहम्मद इस्माइल खाँसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।- रासस